3 Waxyaabaha qaangaarka ah ee waayeelka ah ee isticmaala marijuana waa inay ka taxadaraan • Dawooyinka Inc.eu
Maaddaama marijuana ay ka gaadhay sharci sharci dalal dhowr ah iyo gobollo badan oo Ameerika ka mid ah, isticmaalka xashiishku wuxuu soo maray geeddi-socod dib-u-qiimeyn ah. Dadka da 'walba ha u furnaadeene waxay isku dayayaan dhirta, ha ahaato madadaalo ama ujeedooyin daawo. Mid ka mid ah dadka ugu dhaqsaha badan ee sii kordhaya waa dhallaanka soo koraya - laga soo bilaabo kororkii ilmaha kadib Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
1 Falcelinta dawada
2 Khatarta sare ee dhicitaanka iyo shilalka
Daraasad cusub ayaa lagu ogaaday in muddadii u dhexeysay 2016 iyo 2018, marijuana ay ku dhowaad laban laabantay ragga da'doodu u dhaxayso 65 ilaa 69.
Sida laga soo xigtay NBC News:
Ragga da'doodu tahay 60 ilaa 64 waxay soo sheegeen heerarka ugu badan ee isticmaalka marijuana, iyadoo 12,6 boqolkiiba dadka la wareystay ay sheegeen inay daroogada isticmaaleen 30-kii maalmood ee la soo dhaafay ee 2018, ilaa 8,9 boqolkiiba 2016. Isla mudadaas, Isticmaalka sidoo kale wuxuu kudhowaad laban laabmay ragga da'doodu tahay 65 ilaa 69 (laga bilaabo 4,3 boqolkiiba 2016 ilaa 8,2 boqolkiiba 2018) iyo ragga da'doodu tahay 70 ilaa 74 (laga bilaabo 3,2 boqolkiiba ilaa 6 boqolkiiba). Isticmaalka dumarka wuu yaraaday.
Qoraaga daraasadda ee Bill Jesdale wuxuu sheegay inuu hayo aragtiyo qaar sababta dadka waayeelka ah ee waayeelka ahi u isticmaalayaan xashiishadda, sida rabitaanka weyn ee qirashada ay u isticmaalaan maxaa yeelay waa diidmo yari, waxay leedahay dawooyin badan, iyo in yar iyo ka yar. xakamaynta ayaa ka soo horjeeda isticmaalka.
Waxaa jira arrimo kale oo wax ku biirinaya sidoo kale, oo ay ku jiraan isbeddel caalami ah oo ku wajahan daawooyin dabiici ah oo dheeraad ah, iyo dadka waaweyn ee waayeelka ah oo si gaar ah u doonaya xannuun joojinta iyo qalabka hurdada, oo laga doorbidayo kuwa aan lahayn waxyeellooyin weyn.
In kasta oo dhalinyarada qaangaarka ahi ay weli yihiin kuwa ugu badan ee xashiishadda ku nool Maraykanka, kororka isticmaalka waayeelka iyo waayeelka ayaa walwal ka qaba cilmi-baarayaasha qaarkood; Waxaa jira dhowr arrimood oo saameyn ku yeelan kara saameynta marijuana ee iyaga.
Waa kuwan seddex ka mid ah kuwa ugu dhaqsaha badan:
Arrinta ugu daran ee khubarada caafimaadku ka walaacsan yihiin ayaa ah saameynta ay marijuana ku yeelan karto dawooyinka sida caadiga ah loo isticmaalo ee ay qaataan dadka waaweyn. A dib u eegis la daabacay joornaalka kuliyada wadnaha ee mareykanka joornaalka ayaa sheegaya in marijuana ay la macaamili karto daawooyinka wadnaha ee caadiga ah, sida statins iyo dhiig khafiifiyeyaasha. Isticmaalka Marijuana waxay beddeli kartaa waqtiga ay daawooyinkani dhaqan galaan waxayna sidoo kale u horseedi kartaa dhiig bax badan.
Dadku sidoo kale waa inay iska ilaaliyaan isku darka marijuana daroogada suuxdinta ama walax kasta oo kale oo leh saameyn xoog leh. Haddii qalliin lagu sameynayo, waxaa muhiim u ah dadka waayeelka ah inay u sheegaan isticmaalka marijuana dhakhaatiirta, oo ay ku jiraan isticmaalka CBD. Xarunta ayaa sidoo kale lala xiriiriyay inay beddeleyso habka beerka uu u shaqeeyo qiyaasta daawooyinka.
Khatarta sare ee dhicitaanka iyo shilalka
In kasta oo ay tani runti run u tahay dadka waayeelka ah, isticmaalka marijuana wuxuu sababi karaa dawakhaad iyo dareemidda xakameyn la'aanta jirkaaga. Tani, markaa, waxay kordhin kartaa halista dhicitaanka iyo ku lug lahaanshaha dhammaan noocyada shilalka. Dhicitaanku wuxuu halis weyn ku yahay dadka waayeelka ah, 1tiiba 5 ayaa u horseedda dhaawac madaxa ama lafo jaban.
Waayeelka iyo dadka waaweyn ee halista ugu weyn ugu jira waallida iyo jahwareerka waa inay ka taxaddaraan qaadashadooda marijuana, gaar ahaan markay isticmaalayaan alaabada leh THCnuxurka THC iyo saameynteeda nafsaaniga ah waxay u keeni kartaa waxyeelo lama filaan ah dadka ku dhacay ama u nugul cudurka dhimirka.
Ilo ay ka mid yihiin CNN (EN), HogaamiyahaEN), NBC News (EN), TheFreshToast (EN)
Americacannabiscaafimaadkacilmi baariswaayeelkaTHCMaraykankadadka waaweyn
Duqa magaalada Den Oudsten ee Groningen ayaa sheegaysa dhibaatooyinka la xiriira beerista cannabis sharci
Haddii Groningen kaqaybqaato maxkamadeynta haramaha sharciga ah, duqa magaalada Peter den Oudsten ayaa u sacbinaya ...
Mascotte wuxuu olole ku bilaabayaa waraaqo duuban oo xaddidan oo xaddidan
Dimuqraadiyiinta Mareykanka waxay soo saaren sharci cusub oo lagu xakamaynayo lahaanshaha daroogada
Gudiga caafimaadka Japan waxay taageereen mooshinka dambi looga dhigayo isticmaalka xashiishadda madadaalada